Celegroup - Page 309 of 315 - NEWS AND MEDIA
February 1, 2021 Celegroup1975 0
ပိုမိုကြိုးစားစမ်းပါ မရေရာတဲ့ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်နေမယ့်အစားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်အတွက်အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါ။စိတ်နေစိတ်ထားကို အရင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါမှဘဝအနေအထားကို တိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်။ ကိုယ်ပိုက်ဆံရတာ နည်းတယ်ဆိုပြီး မညည်းညူပါနဲ့။ကိုယ်ကအရင် ကြိုးစားစမ်းပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးတက်အောင် ကြိုးစားစမ်းပါ။ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဆိုတာအတိတ်ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သင်ယူတတ်တဲ့ အရည်အချင်းဟာအနာဂ်ဂါတျကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။အထီးကျန်တဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါမှအောင်မြင်မူရဲ့ ဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မည်။ ကြိုးစားစွန့်စားရမယ့် အရွယ်မှာသက်တောင့်သက်သာဘဝကို မမက်မောမိပါစေနဲ့။ကိစ္စတော်တော်များများမှာမျော်လင့်ချက်ရှိမှ ဝီရိယရှိတာ မဟုတ်ပါ။ဝီရိယရှိမှ မျော်လင့်ချက် ရှိတာပါ။ သူများက သင့်ထက်ကြိုးစားလို့ဖိအားဖြစ်ပေါ်စေတာ မဟုတ်ပါ။ဖိအားဆိုတာ သင့်ထက် အများကြီးထူးချွန်နေတဲ့လူကသင့်ထက် အများကြီးကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်တယ်။ သင်လုပ်နေတဲ့ […]
မငယ်တော့တဲ့အခါ တစ်ခုခုဆို ပုံကြီးချဲ့ ခံစားဖို့ထက်မြန်မြန်မေ့ပစ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားမိလာတယ် ။အဝတ်အစား အပြင်အဆင်အနေအထိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူအထင်ကြီးခံရဖို့ထက်ယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့ပဲပိုရွေးချယ်ဖြစ်လာတယ် ။ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ သိပ်မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ ကိုယ့်နေရာလေးမှာပဲအေးအေးဆေးဆေး ပိုနေချင်လာတယ် ။လိုချင်တာတစ်ခုလောက်ရပြီးရင်ဒုက္ခတွေ တစ်လှေကြီးလာတတ်သေးကြောင်းပိုသိလာတယ် ။ သိပ်ချစ်ပါတယ် ပြောပြီးအနေတန်းသွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကိုလည်းပို မြင်တတ်လာတယ် ။လူချင်းသာ အမျိုးတော်ပြီးပိုက်ဆံချင်း သူစိမ်းလိုနေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေ ၊ ရှေ့မှာသာ ကောင်းပြပြီးနောက်ကွယ်ကျ ဒုက္ခ ပေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ တစ်လေတွေကိုလည်းခွဲခြား နားလည်လာတယ် ။ ကိုယ့်ရှေ့ အကြွားအဝါတွေ […]
ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက် ချမ်းသာနေရသလဲ…..
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးတစ်ဦးကိုလူငယ်လေးတစ်ယောက်က မေးဖူးတယ်။ ဦးလေး ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက် ချမ်းသာနေရသလဲတဲ့ဒီတော့သူဌေးကြီးက ပြန်ပြောတယ်ငါ အရမ်းချမ်းသာချင်တဲ့.စိတ်လေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့ ပေါ့ကွတဲ့။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့လူငယ်စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျနဲ့ သိပ်နားမလည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ဒါ့ကြောင့် ထပ်မေးလိုက်တယ်။ဦလေး.လူတိုင်းကတော့.ချမ်းသာချင်ကြတာပဲလေလို့ ဆိုတော့..။ မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်လေး မျှသာပဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူတိုင်း လူတိုင်းကတော့စိတ်ထဲမှာ ချမ်းသာချင်ကြတယ်။ အိမ်မက်တွေ မက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အိမ်မက်ထဲမှာပဲစိတ်ကလေးကပျောက်ကွယ် ပျက်စီးသွားကြတယ်။လူတစ်ယောက်က စက်ဘီးကို အရမ်းစီးတတ်ချင်တယ်။ဒါ့ကြောင့် မနားမနေ သင်ယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်ဘီးက မတော်တဆ လဲကျသွားလို့ချေထောက်ကျိုးသွားတယ်သူစက်ဘီးစီးရမှာ […]
January 31, 2021 Celegroup1975 0
ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့ ” လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးဆိုတာအလုပ်လုပ်ခြင်းပဲ “” အပြောနဲ့ ကဲ့ရဲ့တတ်သူတွေကို အလုပ်နဲ့အနိုင်ယူရမယ် “” လုပ်သင့်တာကို လုပ်မှ လိုချင်တာကို ရမယ် “” အားကျပါ မနာလိုမဖြစ်နဲ့ ” ” လောကမှာ ဘာတစ်ခုမှ အလကား မရပါ ဒါပေမယ့်တန်ဘိုးအကြီးဆုံးနဲ့ အခမဲ့ရတာကတော့မိဘရဲ့ မေတ္တာနဲ့ စေတနာပဲ ” ” နေပူထဲရောက်မှ အရိပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိလာမယ်ကန္တာရထဲရောက်မှ ရေတစ်ပေါက်ရဲ့တန်ဖိုးသိလာမယ်”စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်မှ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့စေတနာကို သိလာမယ် […]
တာဝန်ကို ယူတတ်ပါစေ တကယ်လို့ လှည်းကိုဆွဲနေတဲ့သူက သင်ဆိုရင် အပေါ်မှာ အဖေ နဲ့ အမေရှိတယ် ၊အောက်မှာ မိန်းမ နဲ့ ကလေးရှိတယ် မတော်တဆ ချော်လဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်မိသားစုတွေ အခက်အခဲဖြစ်ပြီ ။ တစ်ခြားလူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာ မင်းဟာ မြက်တစ်ပင် ဖြစ်နေပါစေ မင်းမိသားစုရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ မင်းဟာ ကောင်ကင်ကြီးလိုပါဘဲ !! ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အသက်ရှင်တာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ် မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်ရှင်တာ တာဝန်ယူစိတ်ရှိရမယ် !! […]
သိထားစေချင်တယ် လူတွေနဲ့ စကားပြောရင်သိပ် မပွင့်လင်းနဲ့ ၊ကွယ်ရာကျ ကဲ့ရဲ့တတ်တယ် လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် သိပ် မရောလိုက်နဲ့ ကိုယ့် အားနဲချက်ကို နင်းသွားတတ်တယ် !! လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် သိပ် မစပ်စုနဲ့ ၊အထင်သေး အမြင်သေး ပြန်ကြည့်တတ်တယ်လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် သိပ် မဝေဖန်နဲ့ ရွံစရာလူလို့ သတ်မှတ်ခံရလိမ့်မယ် !! လူတွေနဲ့ စကားပြောရင်သိပ်မချီးကျူးနဲ့ ၊မရိုးသားသူလို့ မြင်သွားလိမ့်မယ် လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် စကားဖြတ်မပြောနဲ့ ၊မယဉ်ကျေးသူလို့ […]
ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပါ ထပျမှာပါရစေ ဖတျ ဖွဈအောငျ ဖတျသှားပါ !
လောကဓံ ကောင်းတစ်ခါ ဆိုးတစ်လှည့်နဲ့ ၊ရယ်မောလို့ အားမရသေးခင်မှာမင်း ငါ့ကို ငိုခိုင်းပြန်တယ် ဝမ်းသာလို့ မပြီးသေးခင်မှာ ပဲ ငါ့ကို ဝမ်းနည်းခိုင်းပြန်တယ် မင်း အလိုမကျရင် ပေါ့ !!မင်း အလိုများ ကျလို့တော့လား ဝမ်းနည်းတဲ့ အခါမှာလဲ ဝမ်းသာစရာတွေနဲ့ တွေ့ပေးပြန်တယ် !! စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အခါမှာလည်း အားတတ်စရာတွေနဲ့ ပေးတွေ့ပြန်ရော လောကဓံ မင်းဟာလေ ၊ချစ်စရာလဲကောင်း မုန်းစရာလဲတယ်ကောင်းပါလား ကွာ !! မင်းကို ငြီးတွားပြီး […]
ယနေ့အကြိုက်ဆုံးဥပမာ ငါးတစ်ကောင် ကုန်းပေါ်ရောက်လာပါတယ် ။ရေထဲပြန်ဆင်းဖို့အတွက် သူ လူးလှိမ့်ခုန်ပစ်ပေမယ့် ၊ရေမြောင်းဆီကို မရောက်နိုင်ဖြစ်နေတော့ သူစိတ်လျော့လိုက်တယ်..သေပါစေတော့ ပေါ့ !! ဒါကိုပုရွက်ဆိတ်တွေ မြင်တော့ငါးကို ကယ်မယ် လုပ်ကြတယ်ပုရွက်ဆိတ်တစ်ချို့က ငါးကို ဝိုင်းချီကြပြီး ၊ရေမြောင်းစပ်ဆီ ပို့မယ်ပေါ့ !!! ပုရွက်ဆိတ်ခေါင်းဆောင်က ပြောတယ် “မချီကြနဲ့…မနိုင်လောက်ဘူး..””ငါတို့ သူ့ကို နာအောင် ဝိုင်းကိုက်ကြမယ် “ဆိုပြီး ဝိုင်းကိုက်ကြလေတော့ ငါးက နာလွန်းပြီး တအားပဲလူးလှိမ့် ခုန်ဆွ ပြေးရင်း ၊ရေမြောင်းစပ်ဆီကို ရောက်သွားတယ် […]
အရမ်းကောင်းပါတယ် ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ဘုရင်၏ နောင်တ တစ်ခါကဘုရင်တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။သူ့မှာအမဲလိုက်ခွေးဆယ်ကောင်မွေးထားတယ်။သူ့ ဝန်ကြီးတွေထဲကတစ်ယောက်ယောက် အမှားလုပ်မိပြီဆိုရင် အဲ့ဒီခွေးတွေရှေ့မှာပစ်ချခိုင်းလေ့ရှိတယ် ။ခွေးတွေက အဲ့ဒီဝန်ကြီးကို အရိုးတစ်ခြား အသားတစ်ခြားစီဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်တယ် !! တစ်နေ့မှာ ဘုရင့်ရဲ့အထူးအရေးပါတဲ့ဝန်ကြီး တစ်ဦးက ဘုရင်ကိုမှားယွင်းစွာအကြံပေးမိတယ်။ဒီအကြံကို ဘုရင်ကမနှစ်မျို့ခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ပဲ အဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုလည်း ခွေးတွေရှေ့မှာ ပစ်ချဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်။ဝန်ကြီးက ဘုရင်ဆီမှာ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုတယ် !! ” ဘုရင်ကြီးခင်ဗျားကျွန်တော်မျိုးမှာ ဘုရင်ကြီးဆီမှာ နေ့မှန်းမသိ ညမှန်းမသိ ၊အလုပ်အကျွေး ပြုစုခဲ့တယ် ။ခုဘုရင်ကြီးက ကျွန်တော့်ရဲ့ အမှားတစ်ခုလေးအပေါ်မှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ […]
ချစ်သူများနေ့အတွက် သတိပေးစာ ညီမလေး ခဏတာ သာယာမှုအတွက်နဲ့ တစ်ဘဝစာ ထိမ်းသိမ်းလာတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ချောကလက်နဲ့ လဲမစားလိုက်နဲ့နော်။ အပျိုစင်ဆိုတာအလွယ်တကူတိုင်းတာလို့ရတဲ့ ကိရိယာမရှိဘူးဆိုပေမယ့်၊ တစ်ဘဝစာတော့ လိပ်ပြာလုံမှာမဟုတ်ပါဘူး !! အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို အားကျမိရင်တော့ အနောက်တိုင်းလို ကိုတို့နိူင်ငံက လက်မခံတတ်ကြဘူးလေ။လူ့သဘာဝက အသစ်အသစ်တွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတတ်ပြီး ဟောင်းနွမ်း ရိုးအီသွားရင်တော့ချောင်ထိုးသွားတတ်တယ် !! မျက်နှာသုတ်ပုဝါတစ်ထည်ကို ဘယ်သူကမှ မီးဖိုချောင်မှာ လက်နှီးစုတ်အဖြစ်မသုံးကြသလို လက်နှီးစုတ်ကိုလည်း မျက်နှာသုတ်ပုဝါနေရာမှာ မသုံးကြပါဘူး !! ပတ္တမြားကျောက်စီဓါးလို ဧည့်ခန်းမှာတင့်တယ်ချင်ရင် […]
ဂျက်မား ကပြောတယ် ဆင်းရဲပါစေ ငွေချေးပြီး သွားမဖြုန်းနဲ့ ခက်ခဲပါစေ ကတိမတည်ဘဲ မဖြစ်စေနဲ့ !! အကြွေးတင်ရင် အသက်ကိုရင်းပြီး ပြန်ဆပ်ရမယ် ပြန်မဆပ်နိုင်သေးရင် ဖုန်းဆက်ပြီးပြောသင် မမေ့ဘူးဆိုတာကို သူများသိအောင်ပြ !! ရိုးရိုး သားသားနဲ့ လူလုပ် ဘယ်တော့မှ သူများက သင့်အပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုကို မပျက်စေနဲ့ !! သူများ သင့်ကိုယုံကြည်တာဟာ သင်က သူများရဲ့ရင်ထဲမှာ တည်ရှိနေတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လို့ပါဘဝခရီးက ရှည်တယ် လမ်းကျဉ်းအောင်တော့ မလုပ်နဲ့ !! […]
ဖတ်ပြီး တွေးကြည့်ပါအရမ်းကောင်း ပါတယ်
တစ်ပုဒ်ချင်းဖတ်ပြီး တွေးကြည့်ပါအရမ်းကောင်း ပါတယ်။ ဂျူး လူမျိုးတို့ရဲ့ စာသား ( 1 ) ရေညစ်တစ်စက်ကြောင့် ရေကြည်တစ်ခွက် ညစ်ပတ်သွားတယ် ။ ရေကြည်တစ်စက်ကြောင့် ရေညစ်တစ်ခွက်ဘယ်တော့မှ ကြည်လင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး !! (2) ဘယ်သူ့မှ ခိုးယူမသွားနိုင်တဲ့ အရာသုံးမျိုး ရှိတယ်။ ဗိုက်ထဲကို ဝင်ပြီးတဲ့ အစာစိတ်အတွင်းထဲက အိပ်မက်နဲ့ ဦးနောက်ထဲအထိ ၊ ဖတ်မှတ်ထားတဲ့ စာကောင်းပေမွန်များ ဖြစ်ပါတယ် !! […]
« 1 … 308 309 310 … 315 »